Umakhi oneminyaka engamashumi asibhozo oneminyaka engamashumi asixhenxe esebenzayo kule ntsha, wathi: "Kwakungekho imini engazange ndiyicombulule ingxaki yemathematika. Imfihlelo yokucaca ingqondo ihlala iqeqeshwe." Nokuba imfihlo 'yokungaphuli' ingqondo?
Abantu ababini asebekhulile-yena kunye naye-bahamba ngepaki. Wonke umntu ojongeyo, uyaqonda - bayathandana okanye ahlawule okanye angaphantsi kweminyaka engamashumi amathathu okanye emashumi mane edlulileyo. Baye bakwazi njani ukugcina, "musa ukucima" iimvakalelo zabo? Kutheni abazange balahlekelwe uthando lwabo? Nazi ezinye izicatshulwa zezibini.
Musa ukufihla imvakalelo yakho.
Ukuvuma kothando akunakunceda. Nangona yonke into efanelekileyo kwintsapho yakho, abantwana abancinci bakhula, kwaye unesiqiniseko sokuvakalelwa, bathi ngamanye amaxesha: "Ndiyakuthanda." La magama amathathu alula azisa ukuzithemba, unike ukufudumala, uncede unqobe ukukhathazeka kwansuku zonke. Ungavumeli ukuba umkhwa ungonakalise iimvakalelo zakho.
Zama ukubamba izandla rhoqo.
Xa abantu benamathela kwisandla somntu, banemizwa yokhuseleko kunye nokhuseleko. Bamba isandla sabantwana, bambambe omnye komnye, kwaye akukho nto, akukho mandla oza kuchithachitha.
Bonisa iimpawu zengqalelo.
Iimvakalelo aziyi kutshabalalisa xa kukho intlanganiso kunye nokwahlukana kuya kuba nobusiso obunothando. Nangona isitho esincinane kunazo zonke ilungu lentsapho yeso sizathu esihle sokubonisa ibhotile ye-chocolate, isiqhamo seentyantyambo, nje ilizwi elincinci. Jonga i-TV - umququze umntu wasekuhlaleni ngamagxa, udlula umntu ohleli emva kwencwadi - thintela ngobumnene okanye udibanise esitini.
Yenza umangaliso omnye komnye.
Ewe, oku akulula, kodwa kuyimfuneko ngezikhathi ezithile. Ukumangaliswa akunakuphela kwisipho, kodwa kwisiphakamiso esingalindelekanga. Ngokomzekelo, ngandlela-thile sichitha ngokuhlwa, uye kwindawo ethile, njl.
NoSuku lweValentine Emva koko, le nto ingesizathu esihle sokugcina iimvakalelo kuphela, kodwa kubaluleke kakhulu ukukhumbuza uthando olukhulu. Ngokomzekelo, iitheyibhile yokuzonwabisa yeSuku lweValentine idinga ukuyilwa yothando.
Eli holide lidibene neeresi nentliziyo. Ngoko ke iinkcukacha eziphambili zemihlobiso - iirasi kunye neentliziyo kwiintlobo ezahlukeneyo zokuyila. Musa ukulibala ngeebhaluni-iintliziyo. Beka etafileni i-vase ephantsi kunye nee roses. Le holide yeentyatyambo kufuneka ibe yinto eninzi, ngoko ukhetho lwakho lokuyeka kwiirusi zasendle. Izitya eziphekiweyo nazo zinokubongwa ngeentliziyo, ukuqala komnye nomnye. Lungiselela naziphi na izitsha zokutya.
Ngethuba nje isibini sibini sondla intlonelo nothando omnye nomnye, ulwalamano olululanayo luhlala luhlala, kwaye imizwa yakho yesisa ayisoze 'iphele.'
Uyazi njani ukuba umtshato wakho uzinzileyo?
Umfana wayeke ukundithanda kwaye wandithiyile?
Ubungqina benkwenkwezi yeveki kaFebhuwari 12-18 kuzo zonke iimpawu zodiacac
Ndiyamthanda intombazana, kwaye uyayithanda enye
Indlela yokwenza umthi weKrisimesi weedonsi, iklasi yeklasi kunye nesithombe
Yintoni eya kuba ngumnyaka we-2018 weNja yeCapricorn
Indlela yokucoca isepha kwi-dirt
I-saladi yenkukhu nge-sauce yeshizi
Ngubani oza kuzuza i-Eurovision -2016: ukubikezelwa kweengqondo kunye nokubikezelwa kwababhuki namhlanje
Isalathisi sobunzima bomzimba womntwana